स्थानीय तहमा हारेकालाई राज्यमन्त्री ! - Baikalpikkhabar
स्थानीय तहमा हारेकालाई राज्यमन्त्री !
एमालेले स्थानीय तहमा हरायो, एमालेले नै सिंहदरबार छिरायो
जेठ २२/ राजनीतिकर्मीको भाग्य होस् त राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङको जस्तो ! २०७४ सालमा टोखा नगरपालिकामा उपमेयरको चुनाव जितेकी भए गुरुङ अहिले स्थानीय तहका घरायसी मुद्दा–मामिलाहरु हेर्दै बसिरहेकी हुने थिइन् । तर, चुनावमा ९९ मत मात्र ल्याएर उनी ‘सौभाग्यवस’ पराजित भइन् ।
उपमेयरमा हारेपछि उनी समानुपातिक सांसद भइन् । र, संसद विघटन भइसकेपछि शुक्रबार रातिदेखि सिंहदरबारमा मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पुगिन् । गुरुङलाई स्थानीय तहमा एमालेले नै हराएको थियो, तर सिंहदरबार पनि एमालेले प्रवेश गरायो । आफैंले हराएको व्यक्ति मन्त्री बनेपछि टोखाका एमाले कार्यकर्ताहरु भने छक्क परेका छन् ।
उपमेयरको चुनाव हारेकी गुरुङ जसपाका तर्फबाट शुक्रबारदेखि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बनेकी छिन् । समाजवादी पार्टीबाट चुनाव लडेकी उनले उपमेयरमा जम्मा ९९ मत मात्रै पाएकी थिइन् । चुनावमा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित उपमेयर ज्ञानमाया डंगोलले ८ हजार ९८ मत पाएकी थिइन् ।
शनिबार, २२ जेठ, २०७८, रातीको ०९:२८ बजे